Arithmetika fanatanjahan-tena marobe - pejy fandokoana maimaim-poana
Ny fikajiana ny tsipika isa dia maneho ny elanelana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny isa amin'ny laharan'ny isa tsirairay ary koa mampiroborobo ny fandinihana sy ny fifantohana marina.
Kajy amin'ny tsipika isa hatramin'ny 1000
Ny elanelana misy eo amin'ny isa dia mitovy foana ary arakaraka ny andehananao ankavanana amin'ny tsipika isa no mahabe ny isa. Ny tsindry iray amin'ny sary dia manokatra ny maodely andalana isa amin'ny endrika pdf:
Ho hitanao ihany koa ny torolàlana momba ny fomba fanaovana kajy amin'ny fampiasana ny tsipika isa fanazaran-tena maromaro kokoa amin'ny pejy topinay.
Manana fanontaniana, sosokevitra na fanakianana ve ianao? Aza misalasala mifandray aminay. Mitady modely misimisy kokoa ho an'ny lesona an-tsekoly na hampihatra arithmetika amin'ny laharana isa miaraka amin'ireo zanakao ao an-trano ve ianao? Aza misalasala mifandray aminay raha mila hevitra vaovao!